Ụbọchị My Pet » -Esi karịrị Online dịwara na-akpọ ụkwụ
emelitere ikpeazụ: Ka. 29 2020 | 3 min agụ
Kacha nkịtị-ezighị ezi nke online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị bụ eziokwu na ndị ka na-aghọta na ọ dị ka a dị ize ndụ na-elekọta mmadụ ọrụ. Olee otú ọtụtụ ugboro ọma pụtara (ma na-eji obi ụtọ mmasị) enyi gasped egwu mgbe gwara banyere online matchmaking saịtị na ị na dị nnọọ bịanyere aka elu on? "Gịnị ma ọ bụrụ na ị na-ezute a dodgy onye?", "Ọ dị mma mgbe nile?"Na" All gị onwe ozi ga-abụ maka onye ọ bụla nọ n'ụwa ahụ!"Bụ ma ama ajụjụ na-ekwu na otu onye a na-enweta mgbe na-eme ka a mara ọkwa na ha banyere inye online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na saịtị a laa. Ọ bụ eziokwu na e nwere murky ize ndụ ndị na online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, ọ ga-abụ ihe na-abụghị eziokwu na-ekwu na ọ ga-abụ ihe ize ndụ karịa, na-ekwu, buru onye si a mmanya. N'ezie, na-adịbeghị anya ọnụ ọgụgụ na-egosi na 2013, 17% nke di na nwunye na mbụ zutere online.
O doro anya na, online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị bụ a usoro na-arụ ọrụ nke ọma n'ihi na ụfọdụ ụdị nke ndị mmadụ. Ndị hụrụ ihe ịga nke ọma na saịtị ndị a na mbụ enwebeghị ike izute oruru mmekọ ruru ọtụtụ ihe. Dị ka ihe ndị ọzọ niile, ezie, nke a abụghị a failsafe usoro adaa gị ịrịba ama ndị ọzọ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na ike gwụrụ kasị ụzọ gị search obi ụtọ, online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị bụ otu nhọrọ dị ka ihe ọ bụla ọzọ. Oge mbụ ọrụ nwere ike ubé rikpuru ịdị obosara nke online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị. Akpa oyi, na e nweghị ebe ke agbasa onwe gị kwa thinly. Chọpụta, ọ dị nnọọ mfe okwu nke ikenye elu a foto ma ọ bụ abụọ, ede a ole na ole chọpụtara nke kasị mma ihe ngosi àgwà gị, pịa Tinye na-ịchọrọ nke kasị mma. N'akụkụ aka nke ọzọ, ọ ga-aka mma na-eduzi obere nnyocha na chọpụta ihe banyere ahụ dị iche iche nke online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na saịtị na dị. Ọ ga-abụ ezi echiche iji nweta ihe ọmụma banyere saịtị nke nwere klientele na-n'ókèala ndị ọzọ na-adọrọ adọrọ.
Mgbe ịbanye na iche iche na saịtị, echefukwala na-agụ ezi ebipụta. Ee, na saịtị ndị a na-ewu ewu na-arị elu hugely ọma udu. N'agbanyeghị, ọ dịghị mgbe ọ na-afụ ụfụ chọpụta ihe banyere ndị na-eri kwa ọnwa otu ụgwọ. Ụfọdụ saịtị na-mara na-ana ọzọ ụgwọ ka unu inweta ohere ka a wider otu profaịlụ ebe ndị ọzọ pụrụ nwere mmezi-akwụ ụgwọ n'ihi na ihe ịga nke ọma egwuregwu gbasie. -Echeta mgbe nile na ihe ndị a na saịtị ndị ulo oru nke na-enye ọrụ gị. Ọ bụ maa ezigbo ọrụ ma ị ka na-achọghị na-ejide na-akwụ ụgwọ ihe karịa gị n'ezie ga-. E nwere ọtụtụ ezigbo saịtị dị gị nke adịghị eri a bọmbụ.
Ọtụtụ ndị bụ ndị na-kechioma izute ha ịrịba ndị ọzọ site na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na saịtị nanị mere otú na mgbalị na ndidi. Cheta na nke a abụghị a failsafe usoro nke hooking na onye. Dị nnọọ ka na ndụ, nzute nwere mmekọ ndị a n'ihi oge, chioma na nnọgidesi ike. Ya mere, na-adịghị mwute ma ọ bụrụ na ị na-adaa a ụbọchị mgbe gị na ọnwa mbụ nke edebanye aha maka nke a mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ọrụ. Rome-adịghị wuru na otu ụbọchị ma ọ ga-mmekọrịta gị. Wepụta oge na-aga site ndị ọzọ ndị mmadụ mmadụ na jikọọ na ndị ị na-eche ịrịọ gị ihe kasị. Ọ dịghị ihe pụrụ ime ma na nnọọ dịghị ihe ọzọ ị maara na ị na-na na mere nzọụkwụ mbụ.
Ọ bụrụ na ị nwere ohere "izute" onye ị na-amasị online na mgbe ahụ n'ụzọ gara nke ọma nwetara a ụbọchị, adịghị etinye kwa nrụgide dị ukwuu na a zutere. Dị ka ndị ọzọ nile mbụ ụbọchị, a ga-eleghị anya a harrowing zutere. N'agbanyeghị, chee echiche laa azụ niile ụbọchị ị na nwere n'oge gara aga. N'ezie ọkacha mmasị gị ndị bụ ndị ebe ị na-enwe ike ka ntutu gị ala ma onwe gị obi ụtọ na nke kacha nta na-atụ anya. A n'ozuzu ọchịchị nke isi mkpịsị aka ga-abụ ka onye òtù ezinụlọ ma ọ bụ ezigbo enyi mara oge na ebe gị nzute ka ọma. Ohere inweta bụ gị ụbọchị ga-adịghị eduga ihe ọ bụla dị ize ndụ ma mgbe ọ na-akwụ na-egwu ọ dị mma.
Oge mbụ ọrụ nke online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na saịtị nwere ike nke ọma na-ahụ ya a egwu ahụmahụ. Otu mma anya na ọ ga-abụ na ọ bụ nanị otu n'ime ihe ndị kasị dị irè na bara uru mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ngwaọrụ nke oge a afọ. Cheta na ọtụtụ nke saịtị òtù bịanyere aka elu maka otu nzube dị ka onwe gị: anya n'ihi na ịhụnanya. Ya mere esighi ike ndị n'ubu, dee na profaịlụ na-amalite na gị online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị njem!